MANAKARA : Lehilahy iray hita faty, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Tranga nahatsiravina no niseho tao an-tampon-tanànan’i Manakara, ny talata hariva lasa teo iny. 2 novembre 2017
Lehilahy iray novonoina tamin’ny fomba feno habibiana no hita nofonosana lamba sy selofanina tao anaty tatatra.
Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana dia olona sendra nanary rano tamin’ny tatatra iray teo amin’ny manodidina no nahatsikaritra zavatra hafahafa toa nihosin-drà izany ka tonga dia nampandre haingana ireo mponina. Avy hatrany dia nampiantso ny mpitandro filaminana mpitsabo tao an-toerana izy ireo mba hijery ny raharaha.
Marihana fa tokony ho tamin’ny enina ora hariva teo no nahitana ity seho ity ka efa nanomboka somary maizina ny andro. Rehefa nozahana ity zavatra nifono dia fantatra fa razana no tao anatiny. Talanjona ny rehetra satria notapahan-tanana sy feno dian’antsy ny vatan’io lehilahy io ary nisy rà efa maina.
Nohamarinin’ireo mponina àry tamin’io fotoana io fa tsy nahita olona nifamaly na nisy tranga hafahafa teo an-toerana, etsy andaniny ny tsy fahafantarana ilay lehilahy ka nilaza ny ankabetsahan’ny olona fa mety novonoina tany amin’ny toeran-kafa izy io fa nariana teo amin’io tatatra io fotsiny.
Tsy misy taratasy na karapanondro ihany koa teny aminy ka vao mainka sarotra ny nahalalana ity niharan-doza ity. Hatreto aloha dia mbola eo am-panaovana fanadihadiana ny mpitandro filaminana mikasika ity raharaha ity ka andrasana ny fivoaran’izany.